जाजरकोट, बैतडी र सोलुखुम्बुमा वाम गठबन्धनको अग्रता – Etajakhabar
शनिबार, चैत्र ०३, २०७४ | Saturday, Mar 17, 2018
जाजरकोट, बैतडी र सोलुखुम्बुमा वाम गठबन्धनको अग्रता
जाजरकोट, २१ मंसिर (रासस) : प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शक्तिबहादुर बस्नेतले एक हजार १७१ मत ल्याएर अग्रता लिनुभएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका राजीवविक्रम शाहले ८६२ मत ल्याउनुभएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा (क) मा वाम गठबन्धनकै गणेशप्रसाद सिंहले एक हजार ३८१ र काँग्रेसका वेदराज सिंहले ७४१ प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा (ख) मा पनि वाम गठबन्धनकै करवीर शाहीले एक हजार २०० मत प्राप्त गरी अग्रता लिनुभएको छ भने काँग्रेसका दीपकजंग शाहले ६६२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
बैतडी– एक हजार ३७६ मतगणना हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनकाबाट नेकपा (एमाले) का दामोदर भण्डारीले ६५९ मत ल्याएर अग्रता लिनुभएको छ । त्यस्तै काँग्रेसका नरबहादुर चन्दले ५४४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यसैगरी प्रदेशसभा (क) मा ९४८ मतगणना हुँदा काँग्रेसका हरिमोहन भण्डारीले ४११ र वाम गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रेमप्रकाश भट्टले ४११ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा (ख) मा एक हजार ३०५ मतगणना हुँदा वाम गठबन्धनबाट एमालेका लीलाधर भट्टले ६६७ र राप्रपाका गणेश चन्दले ५६८ मत प्राप्त गर्नुभएको प्रजिअ सिद्घराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
सोलुखुम्बु– प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनको अग्रता रहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ एक हजार ४१७ मतगणना गर्दा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईले ७३४ मत ल्याएर अग्रता लिनुभएको छ । काँग्रेसका बलबहादुर केसीले ४३७ मत ल्याउनुभएको छ ।
यस्तै प्रदेशसभा (क) मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उत्तमकुमार बस्नेतले ४२५ मत ल्याएर अग्रता लिनुभएको छ भने काँग्रेसका प्रकाससिं कार्कीले १७४ ल्याउनुभएको छ । प्रदेशसभा (ख) मा गठबन्धनबाटै एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले २४५ मत ल्याएर अग्रता लिनुभएको छ भने काँग्रेसका आङ्गगेलु शेर्पाले २३० मत ल्याउनुभएको छ ।
रुकुम पश्चिममा वाम गठबन्धनको अग्रता
रुकुम, २१ मंसिर । रुकुम पश्चिममा वाम गठबन्धनले अग्रता लिएको छ ।
अहिलेसम्म एक हजार ९३६ मतगणना हुँदा गठबन्धनका जनार्दन शर्माले एक हजार २५८ मतका साथ अग्रता लिनुभएको छ । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका गोपालजीजंग शाहले ४०६ मत ल्याउनुभएको छ । यस्तै नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका शरुण बाँठाले ५८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म १६७ मत बदर भएको छ । यहाँ जम्मा ५५ हजार ६४५ मत खसेको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २१, २०७४ समय: २१:४१:४२
छात्रामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रिन्सिपल पक्राउ, जो आँफैमा प्याब्सनका अध्यक्ष समेत हुन्
आकासे पुल भत्किँदा छको मृत्यु, दश घाइते
भाग पुर्याउन फुटाइए यी मन्त्रालय: एउटा मन्त्रालयको भाग खोसीएपछि बोले लालबाबु, खोले यस्तो रहस्य
यसकारण फोरम सरकारमा आएन
प्रचण्डका खास पात्र हुँदा हुँदै पनि केपी ओली सरकारमा किन अटाएनन् जनार्दन शर्मा?
यूएस बंगला विमान दुर्घटना, मृतकको लिंग पहिचानमै समस्या
आज घोडेजात्रा : जङ्गबहादुरको घोडा किन्ने की ?
सेनाको सुरक्षा रहेको वनमा किशोरीको हत्या: गाडिएको अवस्थामा शव, सेनातिर शङ्काको तीर ?
नेपालमा यौनकर्मी महिला कहाँ बढी पाउने गरिन्छ ? उनीहरु कसरि ग्रहाकको सम्पर्कमा आउने गर्छन् ? उनीहरुलाई कसरि भेट्न सकिन्छ ?
यस्तो छ नेपाली चेली टेरिया मगरको जिबन शैली , कस्तो गाडी चढ्छिन् ? ब्याईफ्रेण्ड को हुन? कति सम्पत्तिकी मालिक हुन?
मानव तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चर्चित पन्जाबी गायक दलेर मेहंदी धरौटी बुझाएर छुटे